Cyberex စွဲလမ်းမှုကိုစတင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု - တစ် ဦး ချင်းအားနည်းချက်၊ အားဖြည့်မှုယန္တရားနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရား (၂၀၁၉၉) - Steele et al ။ , 2019 အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - Porn On Your Brain On
ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကျဘာစွဲ၏: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား (2019): ။ ကောက်နုတ်ထားပါတယ်သံမဏိ et al ခွဲခြားစိတ်ဖြာ, 2013
အပြည့်အဝလေ့လာမှုနှင့်လင့်ခ် - ဘာစွဲ၏ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား (2019)
မှတ်ချက် - အခြားသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သောစာတမ်းများသည်လက်ရှိစာတမ်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013
ပထမဦးစွာသံမဏိ et al ။ (2013) ကြားနေပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာထက်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုသည့်အခါအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (VSS) ၏မြင်ကွင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် P300 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်လွှဲခွင်သွေးဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းရဲ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်သံမဏိရဲ့သုတေသနကိုကိုးကားနိုင်ရန်ပုံမှန်ဘာသာရပ်များကင်းမဲ့သောအယူအဆအတည်ပြုပုံရသည်။ ထို့အပြင် LPP အစိတ်အပိုင်းများသည် P300 ထက်နောက်ကျမည်ဖြစ်သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာသည်သိသာထင်ရှားသည့်ပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဆန္ဒကိုပိုမိုရောင်ပြန်ဟပ်သည် (Hilton, 2014) (တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုလိုသောဆန္ဒရှိလေလေ၊ LPP မတည်ငြိမ်မှုများလေလေဖြစ်သည်) ။ ဤကိစ်စတှငျ Prause နှင့် Steele et al ။ (2015) တိုးတက်မှုစမ်းသပ်မှုမှာ VSS တစ် ဦး ချင်းစီမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုသူများကိုထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအလွန်အကျွံကြည့်ရှုလေ့လာပြီးလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုတင်ပြသောဘာသာရပ်များသည်ခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ LPP amplitude သည်သေးငယ်သောကြောင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ပတ်သက်သောသဲလွန်စများကတပ်မက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအတွေးနှင့်ဆန့်ကျင်နေပုံရသည်။ တကယ်တော့၊ ပညာရှင်အချို့က Prause နှင့် Steele တို့၏လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသောလိင်အင်္ဂါရုပ်ပုံများသည်သူ့အားစွဲလမ်းစေနိုင်သည်ဟုထောက်ပြခဲ့ကြသည်။ စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများ, မစွဲလမ်းများ (Gola et al, 2017; ။ Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse, 2016) ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတွင်ပါဝင်သောသီအိုရီ (IST) ၏သီအိုရီအရ၊ စွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာတိုးလာသည်နှင့်အမျှစွဲလမ်းမှုသည်စွဲစွဲသူများ၏စွဲလမ်းလိုသောဆန္ဒများကိုပိုမိုစွဲလမ်းစေနိုင်သည်။ (Berridge, 2012; Robinson, Fischer, Ahuja, Lesser, & Maniates, 2015)၊ သို့သော်စွဲစွဲသူများ၏စွဲလမ်းမှုမှာတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပြီး LPP လွှဲခွင်လျော့ကျမှုက CA သည်မူးယစ်ဆေးစွဲနေကြောင်းဖော်ပြသည်။
မှတ်ချက်များ YBOP: သံမဏိ et al ။, 2013 မွှမ်းတင်ခဲ့ပါသည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး) ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။
အတူတူအဲဒီနှစျခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များအရ (ရုပ်ပုံများကို) ကြည့်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်းသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကို (လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) တုံ့ပြန်မှုနည်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစွဲလမ်းမှု၏ထူးခြားချက်များဖြစ်သော sensitization & desensitization ။